6-da kulan ee ugu fiican ping pong ee loogu talagalay Android | Androidsis
Haaruun Rivas | 10/07/2021 08:00 | Codsiyada Android, Ciyaaraha Android
Ping pong waa mid ka mid ah cayaaraha miisaska ugu caansan adduunka, sidaas darteed sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Waana inaad u baahan tahay oo keliya miis gaar ah, baalashooyin ama miisaska kubbadda miiska - oo ah magaca kale ee teniska miiska- iyo kubadaha qaar. Taasna, waxaad ku ciyaari kartaa iyada oo aan ka yarayn laba ciyaartoy. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxaa lagu ciyaari karaa moobilka, waana taas sababta aan kuugu soo bandhigeyno isku-dubbaridkan.
Waxaan ku taxnaa taxane ah 6-da kulan ee ugu fiican ping pong ee Android, si aad u hesho midka aad ugu jeceshahay. Dhammaantood waa bilaash oo waxaa laga heli karaa Play Store. Intaa waxaa dheer, waxay ka mid yihiin kuwa leh sumcadda ugu fiican, isla mar ahaantaana sidoo kale waxay ka mid yihiin kuwa ugu soo dejisan uguna ciyaaray.
Halkan waxaa ku soo uruurinaya 6-da kulan ee ugu fiican ping pong ee mobilada Android. Waxaa habboon in mar labaad la adkeeyo, sida aan had iyo jeer yeelno, taas Dhammaan cayaaraha aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Si kastaba ha noqotee, hal ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo dhexdooda ah, iyo sidoo kale astaamaha mudnaanta leh, kaalmooyinka, abaalmarinta, abaalmarinta, iyo in ka badan. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u nimaadno.
1 Waxaan ahay Ping Pong King 🙂
2 Horyaalka tennis miiska
3 Tayniska miiska 3D
4 Pongfinity - Ping Pong aan xad lahayn
5 Kubadaha Kubbadda Miiska Adduunka
6 Miiska Teniska Virtual
Waxaan ahay Ping Pong King 🙂
Waxaan ku bilaabaynaa liiskan aniga oo ah Ping Pong King, oo ah cinwaan aad u xiiso badan oo ay tahay inaad la kulanto 16 tartama oo aad ka adkaato si aad u noqotid boqorka miiska miiska. Waxay leedahay sawiro fudud, laakiin waa wax gaar ah, waxaana lagu ciyaari karaa hal gacan oo keliya. Sifudud waa inaad dabeecadda ka dhigtaa mid gees ka gees u socota, Isagoo isku dayaya inuu soo celiyo kubbadda kana dhigo kan kaa soo horjeeda inuu lumiyo.
Xifaaltanka ayaa wanaagsan. Dabcan, marka hore way sahlanaan doonaan in laga adkaado, laakiin markaa waxaad arki doontaa sida wax u murugsan yihiin. Mid kastaaba wuxuu leeyahay awood kaladuwan oo kaa dhigi karta inaad lumiso; xeeladdu waa inaad had iyo jeer kubbada dib ugu dhufato garaacis. Dhibic kasta oo la gaaro waxay kuu dhowdahay inaad finalka gaarto.
Ciyaartaan kaliya kuma ciyaari kartid ping pong qaab madadaalo iyo madadaalo leh. Waxaad sidoo kale hagaajin kartaa jawaab celinta iyo jawaab celinta, taas oo kaa caawinaysa inaad ku fiicnaato ciyaarta dhabta ah sidoo kale. Dhanka kale, usha, oo ah astaamaha ciyaarta, wuxuu leeyahay qoob-ka-cayaar kala duwan iyo runtii animations qosol leh oo aan ku caajisi doonin waqti kasta.
Horyaalka tennis miiska
Ciyaar kale oo ping pong pong waa miiska Tennis Champion, mid ka mid ah oo leh sawiro qurxoon oo wanaagsan, animations si fiican loo farsameeyay, iyo dhawaq aad u fiican. Cinwaankani wuxuu ku qoran yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican noociisa, mana aha wax aan waxba ka jirin inuu ku faano qiimeyn 4.1-xiddig oo ixtiraam leh oo ku saabsan Play Store iyo in ka badan 100 oo faallooyin togan.
Ciyaartani waxay ku faantaa naqshadeynta 3D fudud, laakiin aad u wanaagsan, firfircoonana waa wax toos ah. Kiiskan, Waxaa loo ciyaaraa si siman oo kaliya waa inaad fartaada u rogtaa si aad kubbada u garaacdo. Waa inaad wajahdaa ciyaartoy tiro badan, mid kastaaba kan kale wuu ka adag yahay oo farsamooyin iyo kartiyo kala duwan leh oo ka soo jeesan kara ciyaar fudud una rogi kara mid adag arrin dhowr heer ah. Tabobar oo naftaada taaji sida ciyaaryahanka ping ping ee ugu fiican dhammaan.
Waxaa jira in ka badan 50 xaaladood oo aad ugu shaqeyn karto sidii ciyaaryahan xirfad leh. Ku guuleysta mid kasta oo ka mid ah oo ha u naxariisan kuwa kula tartamaya. Waxaa sidoo kale jira tartamo caalami ah oo kubada miiska ah oo aad ka dhex muuqan karto. Sidoo kale, waad dhisi kartaa koox kuu gaar ah oo ping pong ah waxaadna la ciyaari kartaa kooxo kale oo xirfad leh
Developer: Ciyaaraha Giraffe Xadka
Tayniska miiska 3D
Sida magaceedaba ka muuqata, 3D Table Tennis-ka waa ciyaar leh muuqaallo wanaagsan iyo sawirro XNUMXD ah. Ciyaartani sidoo kale waa mid fudud, laakiin ma joojinayso inay ka mid noqoto kuwa ugu soo dejisan, marka la eego firfircoonida xiisaha leh ee ay soo bandhigayso
Ka ciyaar horyaal caalami ah oo kubbadda miiska ah, kaas oo aad ku dooran karto waddanka aad jeclaan lahayd inaad metelaan inta badan, oo muujiyo waxa lagaa sameeyay, adigoo la tartamaya ciyaartoy badan, dhammaantoodna leh xirfado aad u fiican oo ka dhigaya inay adag tahay in lagu garaaco ciyaaraha. Haddii aadan xirfad u laheyn inaad fartaada u rogto inaad kubbadda ku dhufato oo aad u celiso kooxda kaa soo horjeedda, tababaro oo noqo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ka hor inta aanad siinin dagaalka dhabta ah.
Dhinaca kale, ciyaartan waxay ka kooban tahay tartamo waa weyn oo ay ka mid yihiin horyaalada adduunka iyo tartan ping pong pong iyo horyaal, sidaa darteed waxaad qaadan kartaa taajka oo waxaad u istaagi kartaa sidii boqorka miiska kubada. Waxa kale oo jira qaab Xirfadeed, oo ka kooban darajooyin iyo hoggaamiye hoggaamiye kaas oo ay tahay inaad isku daydo inaad noqoto kan ugu horreeya. Isla mar ahaantaana, waad furi kartaa waxyaabo cusub, sida qaababka ciyaarta ee kala duwan, oo ma joojinaysid ciyaarta ping pong.
Pongfinity - Ping Pong aan xad lahayn
Pongfinity waa ciyaar u gaar ah dhowr dareen, laakiin in ka badan hal, waana tan soo socota: waa mid aan dhammaad lahayn, sida magaceedu ka turjumayo. Waana in ciyaartani sidoo kale u iftiimayso fudeydkeeda iyo firfircoonaanteeda wanaagsan, taas oo ay tahay inaad taabato si aad uga dhaqaaqdid dhinac dhinac uguna rogto inaad kubbadda ku dhufato oo aad ugu laabato xafiiltanka.
Ciyaartan miiska teniska ee loogu talagalay Android sidoo kale Waxay leedahay meelo iyo xaalado ay tahay inaad ku ciyaarto oo ay ku jiraan mawduucyada volcanoes, hawdka iyo kuwo kaloo badan, wax ka dhigaya mid aan keli keli keli keli ku ahayn oo aanad ka caajisi doonin wax dunida ka jira.
Waxaad u cusbooneysiin kartaa kooxdaada si aad u noqotid mid aan lagaran karin oo naftaada u caleemo saar sida ciyaaryahanka ugu fiican ping pong ee ciyaartan sidoo kale waxaad marin u heli kartaa waxyaabo badan oo xiiso leh oo aad ku ciyaarto. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay jilayaal wanaagsan sida Emil, Miikka iyo Otto, oo aad la qaban karto guulo kala duwan oo aad ku dhammaystiri karto caqabadaha kala duwan ee miiska ciyaarta. Midda kale waxay tahay inaad kaqeybqaadan karto qiimeynta adduunka, taas oo aad ku tusi karto waxa lagaa sameeyay.
Kulankaan wuxuu ka kooban yahay naqshadeynta muuqaalka 'minimalist', fudud oo soo jiidasho leh. Waxa kale oo ay leedahay qiimeyn xiddig 4.6 ah oo ku jirta Google Play Store oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee Android, markaa tani waa ciyaar kale oo ping pong weyn oo lagu ciyaaro meel kasta iyo goor kasta oo aad rabto.
Developer: Madadaalada Linnama
Kubadaha Kubbadda Miiska Adduunka
Haddii aad rabto inaad tijaabiso ciyaar kale oo ping pong ah oo leh muuqaallo 3D ah oo aad u wanaagsan, sawirro iyo animations, World Table Tennis Champs waa bedel wanaagsan. Waana in cinwaankani soo bandhigayo habab ciyaarood oo badan oo aad kala dooran karto, kaas oo aad ku dooran karto waa inaad wajahdaa dhowr mucaarad, midba midka kale wuu ka dhib badan yahay kana xirfad badan yahay kan kale, marka waa inaad horumarisaa ciyaarta ugu horreysa illaa aad ka hananayso farsamooyinka oo aan lagaa adkaan karin.
Hagaajinta dareenkaaga, awoodda falcelinta iyo falcelinta intaad fureyso aagag iyo xaalado kala duwan oo 3D ah (waxaa jira in ka badan 16 oo la heli karo). Dhanka kale, u fuulo boodhadhka hogaamiyaasha si aad u gaarto cinwaanka horyaal aan muran lahayn. Waxa kale oo aad leedahay qaabab ciyaaro kala duwan iyo ciyaaro yaryar oo aad ku madadaaliso wakhti kasta, taas oo aad waliba ku baran karto oo aad ku tababaran karto miiska miiska.
In Kubadaha Kubbadda Miiska Adduunka waad u habeyn kartaa raashinkaaga ama ping pong paddles sidaad u jeceshahay, midabbo aad doorbidayso Waxaa jira kala duwanaansho badan, agab iyo midabbo aad kala dooran karto si aad uga dhigto baakadkaaga midka ugu soo jiidashada badan uguna muuqaalka badan. Ka sokow, waad furi kartaa moodooyinka cusub ee rooga, laakiin, si tan loo sameeyo, waa inaad ku hormarisaa ciyaarta oo aad ka adkaataa kuwa kula tartamaya.
Maskaxda ku hay in ay jiraan jeexjeexayaal leh awoodo gaar ah oo ciyaartaada ka dhigaya mid adag, oo leh xawaare sare iyo dhaqdhaqaaqyo kubbadeed oo kala duwan oo aan siin doonin kuwa kaa soo horjeeda wax fursad ah oo ay dib ugu soo laabtaan.
Dhinaca kale, waxaad ku ciyaari kartaa ciyaartaan miiska ciyaarta hal gacan oo keliya, kana dhigaya mid aad u deggan. Intaas waxaa sii dheer, waad kala habeyn kartaa aragtida udhaxeysa mid dhow, mid caadi ah iyo mid fog, si wax walboo ay ula jaanqaadaan sida aad rabto. Waxaad sidoo kale ciyaari kartaa oo aad ku guuleysan kartaa abaalmarino iyo abaalmarino ciyaarta dhexdeeda ah.
Developer: Multimedia Media Nextwave
Miiska Teniska Virtual
Si loo dhammeeyo qoraalkan uruurinta ee ping pong ama miisaska ciyaaraha tennis-ka ee loogu talagalay Android, waxaan kuu soo bandhigeynaa Miiska Tayniska Miiska, cinwaan kale oo aad hubaal ka heli doontid, labadaba muuqaalkiisa iyo qaab ciyaareedka ay ku faaneyso.
Astaamaha ugu xiisaha badan ee ciyaartan, laga yaabee, taasi waa taas Waxaa lagu ciyaari karaa qaab ciyaartoy badan Internetka ama Bluetooth ciyaartoy kale. Waxa kale ayaa ah inay u badan tahay ciyaarta ugu macquulsan ee ku jirta liistadaan, iyadoo ay ugu wacan tahay muuqaalkeeda 3D-ga oo leh faahfaahin faahfaahsan oo heer sare ah. Waxay leedahay dhowr habab ciyaarta aad u firfircoon, raket kala duwan oo aad u isticmaali karto inuu noqdo ciyaaryahanka ping pong ugu fiican iyo in ka badan.
Developer: Ciyaaraha SenseDevil
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 6-da kulan ee ugu fiican ping pong ee Android
Photocall TV: sida loogu daawan karo in ka badan 1.000 kanaal bilaash adigoo gujinaya kaliya